चीन भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा : भारतीय जनरल रावत « News24 : Premium News Channel
चीन भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा : भारतीय जनरल रावत
एजेन्सी । भारतका चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल विपिन रावतले चीन भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा खतरा भएको बताएका छन् ।
जनरल विपिन रावतले केन्द्रले गत वर्ष हिमालय सीमा सुरक्षाका लागि तैनाथ गरेको दशौं हजार सैनिक र हतियार लामो समयदेखि बेसमा फर्किने अवस्थामा नरहेको बताए ।
एक टिभी कार्यक्रममा जनरल रावतले चीन–भारत सम्बन्धका बारेमा बोल्दै दुवै देश आणविक हतियारले सुसज्जित भएकाले विश्वासको कमी र बढ्दो आशंकाका कारण दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान गर्न कठिन भएको बताए ।
यसअघि गत महिना दुई देशका सैनिक कमाण्डरस्तरीय सीमा वार्ताको १३ औं चरणको वार्ता भएको थियो तर उक्त वार्ताबाट ठोस समाधान हुन सकेको थिएन । यस टेलिभिजन कार्यक्रममा उपस्थित जनरल रावतले गत वर्षदेखि दुई देशबीच ठूलो गतिरोध भएको बताए ।
‘सीमा र सामुद्रिक क्षेत्रमा हुने कुनै पनि दुस्साहसलाई चुनौती दिन भारत तयार छ,’ उनले भने। रक्षा प्रमुख जनरल रावतले अरुणाचल प्रदेशमा पूर्वी क्षेत्रमा चिनी उत्पादनको सम्बन्धमा भने,’ तिनीहरू पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् र यी तथाकथित गाउँहरू एलएसीमा तिनीहरूको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत छन्।’
उनले एलएसीमा हाम्रो क्षेत्र कहिल्यै उल्लङ्घन गरेनन्। त्यहाँ धेरै प्रकारका धारणाहरू छन्। हामी एलएसी कहाँ छ ? भन्ने बारे धेरै स्पष्ट छौं किनभने हामीलाई एलएसीमा हाम्रो स्थिति कहाँ छ ? भनिएको छ र यो क्षेत्र हो जुन हामीले सुरक्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस क्रममा रावतले भने, ‘चीनको धारणा छ जुन हामी केहि क्षेत्रमा जान्दछौं र केहिमा छैन किनभने तिनीहरूले कहिल्यै स्पष्ट रूपमा आफ्नो विश्वास अनुसार एलएसी कहाँ छ ? भनेर बताएनन्।’
टेलिभिजन कार्यक्रममा जनरल विपिन रावतले भने, ‘जहाँसम्म हाम्रो चिन्ता छ, हाम्रो एलएसी क्षेत्रमा त्यस्तो कुनै गाउँ बनाइएको छैन।’